Iholide eziphumulele ogwini iphupho saseCaribbean abantu abaningi. Futhi iningi lazo emelela fantasies zabo zibe ngokoqobo, uya eDominican Republic. Lokhu resort libalele has eziningi amahhotela ezahlukene. Futhi eziyinkimbinkimbi ekhangayo iyona La Bahia Principe La Romana 5 *. Lapha-ke kudingeka siyinake ngokukhethekile.
Ukuze uqale ingxoxo ngamazwi ambalwa mayelana ehhotela. He is abayeshwamayo, elakhiwa ngo-2007. Enye igama lakhe yaziwa, - Grand Bahia Principe La Romana. Kuyinto lokhu eziyinkimbinkimbi e La Romana. Lena elalisanda esikhulu eDominican Republic futhi omunye namachweba akhona laliseduze. Ngaphandle La Romana uye eside kwaziwa njengoba sokuqondisa se-sifundazwe homonymous. Itholakala amakhilomitha angamakhulu kusukela Santo Domingo - inhlokodolobha isimo.
Ihhotela itholakala endaweni evumayo kakhulu. Kusukela lapho sezindiza e Punta Cana ukuhamba cishe imizuzu engu-45 ngemoto. Kodwa lokhu akulona VO. Esikhathini drive ngomzuzu-30 kusukela La Romana sezindiza.
Kodwa inzuzo ebaluleke kakhulu lokhu hhotela isondele eduze lolwandle uhlanzekile. Ngaye, eqinisweni, iningi abahambi lapha uya.
Ngo La Bahia Principe La Romana 5 * enikeziwe zikhona izimo zivumele ukuze uhlale kahle futhi ngananyana yini ukucabanga ngesikhathi yonke iholide. Licasulwe ezinye izimenywa zingase kube ngaphandle ukuthi ikhokhwe-Wi-Fi, obiza $ 15 ngelanga. Kodwa uma intanethi luyadingeka kakhulu, kungaba indawo yokulinda futhi ulisebenzise lapho mahhala.
Kukhona yokupaka yangasese, exchange, ayimi reception, a salon ubuhle, a salon izinwele nelondolo nge zokuhlanza owomile. Ihhotela ifakwe ivulekile Igumbi lenkomfa (umthamo 500 abantu), ibhizinisi isikhungo amancane amakamelo amabili umhlangano. Futhi esitolo ehhotela ayatholakala. Ngo La Bahia Principe La Romana 5 * ngisho sihlinzeke izinhlelo ukuqhuba yomshado. Ngokuvamile, uhla egcwele services ephezulu.
Abasebenzi, ngasendleleni, akanalo nje iSpanishi, kodwa futhi nge-English.
Ngenkathi La Bahia Principe La Romana 5 *, uzothola nesithukuthezi ngokuqinisekile ngeke. Leli hhotela yokuhlala hhayi kuphela ukhululekile, kodwa futhi ngoba ziyinto omuhle. Okokuqala, lapha uzothola amanzi ezemidlalo. Lokhu-kayaking, ukuntweza phezu kwamagagasi, snorkel, umzimba boarding futhi windsurfing.
Okwesibili, akukho okungenziwa igalofu, imishini for motor ezemidlalo, uchwepheshe diving sesevisi, ehlinzekwa ukunikeza uqeqesho kanye nokukhipha izitifiketi uma sekuqediwe. Lemifishane Snorkelling uhambo (kokubili ejwayelekile kanye kwamanzi), imicibisholo, amabhiliyade, inhlangano ukudoba - kukhona ngempela zonke ngalokho ungacabanga ngokuya ukuzijabulisa. Kodwa akugcini lapho.
Futhi lapha ungakwazi ukuqasha ibhayisikili, zifezeke ejimini yesimanje, ukudlala ibhola, volleyball noma ithenisi. Okuningi lapha wafundisa amakilasi dance kanye aerobics. Futhi konke lokhu ungathatha ngokuphepha isikhathi, ngisho nalapho abadala beze nezingane ezincane. Ngempela, Grand La Bahia Principe La Romana 5 * ihlelwe mini-club, okuyinto avulekele zonke abaneminyaka ephakathi kwengu-4 no-12 iminyaka. Futhi kusihlwa ngoba izivakashi zabo bonke ubudala uhlele ukusebenza ezithakazelisayo. Ekugcineni, ngisho ekhasino kukhona.
Ukuze umzimba nomphefumulo
Futhi uzinake ukuthi Grand Bahia Principe La Romana 5 * (Dominican Republic) has a-isikhungo SPA ezinhle, okuthiwa Bahia. Kukhona ungathatha isikhathi izinqubo ezahlukene. Ethandwa kakhulu kukhona izindwangu 100 amaphesenti ushokoledi wendawo. Lokhu kwelashwa uyasondla isikhumba nge amavithamini, amaminerali abalulekile futhi izakhi mkhondo. Futhi, kuhambisana umzimba eliphathisa futhi amafutha massage.
Uma ufuna uphumule, kufanele uvakashele Finnish sauna, ikamelo umusi noma Jacuzzi elise ngaphandle, khona kanye enhliziyweni elimnandi tropical engadini kwezimila.
Kukhona eliphathisa ehlukile, usebenzisa okuyinto kungenzeka ukususa amangqamuzana afile kusuka emzimbeni. Le nqubo ngokuphelele ulungisa isikhumba Tan. Abaningi zibhaliwe ashisayo itshe massage, okuyinto ngokuphelele aqede imisipha ubuhlungu nezingxabano. Okuningi bese luqhutshwa Reflexology. Okungukuthi, massage touch of a ngomunwe ezindaweni ezithile izinyawo. Futhi-ke, ungakwazi ubhalisele amanzi lymph. Lena inqubo okuphumuzayo futhi ewusizo eletha hhayi kuphela fun, kodwa liphinde likhuthaze excretion uketshezi ngokweqile.
Futhi kule ndawo spa yehhotela kwenza i massage Caribbean esihle, ngisho imisipha eqinile (kubagijimi). Imibhangqwana Ivame kubhalwa phezu VIP-massage, okwathi ngemva kwalokho babuyela nazo isikhathi ndawonye ehlukile kubhavu ashisayo esimweni romantic. Namanje kukhona Bahía Spa, okuyinto inhlanganisela eliyingqayizivele amasu amaningana. Ekugcineni, uhlikihla nge aromatherapy. Nokho, lokhu akukhona lonke uhlu amasevisi. Nge uhla egcwele izivakashi zingatholakala lapho usufika kuleyo ndawo.
Ngakho, Gran Bahia Principe La Romana ikhonza izivakashi zayo nhlobo uhlelo lwakho ozithandayo "zonke okufakayo". Ngakho, kukhona zokudlela eziningana, lapho izivakashi zijabulela gourmet cuisine.
Orquidea - kule ndawo yokudlela, esebenza ukudla kwasekuseni, kwasemini kanye dinner. Lapha, ukukhonza cuisine ngamazwe. Ngo Le Gourmet enikeziwe izitsha bendabuko French. Futhi il Capriccio nakanjani babe ukunambitha Ongoti Cuisine Italian. awukudla Mediterranean zikhishwa El Pescador. Esimweni ngasinye kulezi zokudla ezintathu, ngaphandle lokuqala, udinga ithebula zibhalise kusengaphambili.
Futhi by the way, yokugqoka kumelwe futhi kumelwe kugujwe. Ibhishi izingubo futhi kufanale agqoke izikhindi nge izikibha lapha kakhulu wamukelekile. Ukuze amantombazane - sigqoka futhi amabhantshi ngoba amadoda - ihembe ukukhanya ibhulukwe. Ukudla sibukeka kahle ukuze ezingeni yabo kufanele babe yimiqemane.
Inketho phandle lapho, njengoba besho eyenzeka izivakashi ehhotela, ngeke kugculiseke gourmet. Kunezindlela ezihlukahlukene izithelo amnandi, eliphezulu ikhofi organic, soft pizza Izacile, spaghetti, ushizi namasoseji ukusikeka, izinhlobo eziningana inyama kanye kwasolwandle (wakhonza ngisho lobster). Ngo zokuphuza utshwala, lapho kukhona eziningana, ukukhetha olubanzi utshwala kanye Cocktails. Isakhiwo abaningi babo, ngasendleleni, kuhlanganisa rum.
Kuhle isabelomali yokuhlala
Hotel Grand Bahia Principe La Romana inikeza amafulethi lwezigaba eziningana. Ihhotela has amakamelo 400. isigaba Iningi isabelomali - Uphakeme Junior Suite 30 sikwele. m.
Amafulethi elikhanyayo ahlotshiswe in isitayela ethokomele kodwa yesimanje, usethe 2 embhedeni-"bobukhosi 'ubukhulu. suite ngayinye iqala endlini, emi phezulu kwanikeza yangasese. Kukhona ngocingo, ne-plasma TV neziteshi satellite, futhi ngisho ephephile. Kuhlanganisa air conditioning, izindawo ayina, ukhululekile umsebenzi edeskini, ikhabethe futhi ngisho ikhofi umenzi, iwashi le-alamu bese umlandeli. Ngokuvamile, konke okudingayo ukuze sithole induduzo. Futhi-ke, indlu yangasese. With umshini wokomisa izinwele, eshaweni, ubhavu nezindlu zangasese. Mahhala inhlanzeko kits nge izimonyo okunethezeka zifakwe.
amanani Fixed ayikho lapha. Singasho ukuthi eshibhe efulethini izindleko, uma ukubhuka iviki noma amabili ngaphambi kohambo lwakho. Yiba ithuba ngisho uthole isaphulelo. Kulokhu, ukuhlala isonto e suite junior izivakashi ezimbili kuyodingeka bakhokhe emhlabeni izinkulungwane 60-65. Hlikihla. Ukuze uthole eziyinkimbinkimbi 5-star, nokugcinwa "zonke okufakayo" uhlelo, kuba ngentengo ephansi kakhulu. Nokho, lokhu yingakho ehhotela Grand Bahia Principe La Romana 5 * uyathandwa.
Ukuze ihlala nezingane
Abaningi unquma ukuhamba ndawonye nengane. Futhi abanye ukuthatha nabo kanye nezingane ezimbili. Nokho, ungakhathazeki, ngoba ehhotela has amafulethi ngabo.
Nokho, izimo ezingaqinisekile ziyafana. It ahluke kuphela inani lemibhede futhi intengo ukuhlala kwakho. Ngokwesibonelo, uma 2 abadala bathatha izingane ezimbili, ukuhlala phakathi neviki elilodwa kuyodingeka ukhokhe ruble esingaphansi 100 ayizinkulungwane kancane. nengane eyodwa kuphela? Kulokhu, intengo izomashela izinkulungwane 80. Hlikihla. Uma uhlelo efulethini ukuze kuxazululwe abadala abathathu nengane eyodwa, bese nazo zonke ezinye kuyodingeka bakhokhe ayizinkulungwane 110. Hlikihla. Lona khetho eqolo. Kodwa omunye umuntu omdala futhi ingane iholidi laso izobiza ayizinkulungwane 65. Hlikihla. By endleleni, wonke izintengo zifaka phakathi amaphesenti 18-VAT.
izivakashi eziningi, kusale mayelana Grand Bahia Principe La Romana libuyekeza, lekubukana nemfundzi ngamunye wazi abasebenzi ehhotela. Izivakashi bayaqinisekiswa - izinga lenkonzo lapha muhle kabi. UMbuso omkhulu endaweni eluhlaza ukubukela okukhulu - ihlanzekile futhi icocekile ngaso sonke isikhathi. Kungokufanayo uya for amachibi.
Amakamelo bahlanza nsuku zonke. Amathawula nelineni washintsha ne njalo efanayo, njalo restock insipho ewuketshezi, umzimba lotions, amashampu, izinwele isimo nezinye izesekeli.
Abaqondisi esinenhlonipho kakhulu futhi ezimnandi. Indlela ukutshela okuningi, wahlangana cocktail yabo edilini lomshado, ukumamatheka futhi sokulungisa okusheshayo. By endleleni, uma unentshisekelo izinkambo nokuzijabulisa, kufanele uthintane reception - kusekhona ukukhuluma, ngisize nge choice futhi yayala. Kuyinto ezishibhile tour operator.
Izivakashi kokushiya mayelana Grand Bahia Principe La Romana 5 * Izibuyekezo bewathanda etshela ukwaziswa kungaba usizo kwabanye abantu abahamba nje lapha.
Baphetha ngokuthini elisemqoka - uma izihambi zanquma ukuhamba sinqume ukuthi kule ehhotela, kungcono ukuthatha incwadi ibinzana Russian-Spanish ngekhanda izinkulumo ezimbalwa ejwayelekile. Ukubingelela, isibonelo, ukuphathwa friendly, nokunye .. EDominican Republic abendawo ngempela lapho amasiko abo nomunye iphathwa khona ngenhlonipho bese uzama ukubonisa lokhu nolwazi oluyisisekelo ulimi. Futhi akhokhe ukubuya. Izivakashi bayaqinisekiswa - ukuba Spanish nabasebenzi friendly, isevisi kuyoba ngcono nakakhulu. Uweta wotshwala enkantini uyothela oweta ngokushesha ukuletha oda, isibonelo. Ngokuvamile, inhlonipho - isikhali esiyinhloko.
Check-in kuqala 15:00 futhi ihlala kuze kube ihora ukuhamba yosuku. Kodwa lapho izivakashi efika ekuseni, futhi egumbini labo usulungile, ngeke kusadingeka silinde isikhathi eside. Abahlala Kulezo zimo ngokushesha.
Ngisho nalapho wenza isicelo isivakashi bakho abanamandla ubophekile ukuba akhombise imininingwane yekhadi lesikweletu. Futhi kumelwe ezakhe. Ngoba ekufikeni kuyadingeka ukwethula ikhadi kanye ID. Njalo isivakashi, by the way, kuzodingeka ukwethula passport ukubhaliswa. Yini about credit cards, ukwamukela lapha, "Visa" futhi "Master Card".
Ubani okufanele uhambe lapha?
Leli hhotela ephelele kubantu abafuna ukhululekile, ukuphumula iholidi ngaphandle kokuphazanyiswa kwezinye indawo angavamile. Lapho ungakwazi phumula futhi lutho ukucabanga, ukudla okumnandi, izinga iziphuzo kanye ilanga efudumele. Futhi nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, kulokho enye charm Dominican Republic. Kufinyeta, singasho ngokuqiniseka - lokhu ingenye kakhulu "elula" (ngokuya ngenani nekhwalithi) amahhotela eDominican Republic, abasebenza ohlelweni zonke kukonke. Yilokho abaningi yakhe futhi bethandwa.
Ihhotela Manje Larimar Punta Cana 5 * (Dominican Republic, Punta Cana): ukubuyekezwa, izincazelo kanye nokubuyekeza
Rwanda Amahhotela nezindlela ezahlukene ukuba iholidi enkulu e-Afrika
Sharm Grand Plaza Resort 5 *, Egypt: Incazelo ye ehhotela, abahambi Izibuyekezo
Kwezilwane: izibonelo, ngezigaba
Ngingaba nayo cherry umdlezane? Asizwise lokhu!
Dermatitis nodular yezinkomo
Indlela yokwenza curls
Umlolozo ongakhona wegama "ngu", kanye "nosuku" nelithi "izwe"
Formula amabutho. Amandla - ifomula (Physics)
HTC One M8s - ekuhlaziyeni enamandla kusuka Taiwan Toy
Refinancing a mortgage loan: kanjani futhi nini ukushintsha amabhange
Inani labantu base-Nikolaev (Ukraine). Incazelo edolobheni, izimboni kanye ezikhangayo